TOROHEVITRA HELOKA BEVAVA
Fa raha toa ka mila ny TSARA indrindra ny fiarovana heloka bevava mpisolovava, hiantso ny telefaonina isa ambany.
Ny avo lenta ny hananan’ny isika manamafy fa araka ny lalàna dia mitondra ny lohateny hoe ny fanofanana tanora mpisolovava.
Ry mpanjifa hajaina, raha eo amin’ny pejy ao amin’ny tranonkala isika, te-hahafantatra ny vola lany amin’ny fanaovana izany ny heloka bevava ny raharaha, dia avy eo izy tsy eto. Isika hahatakatra ny toe-javatra rehetra dia samy hafa, ny orinasa rehetra dia efa be dia be ny mahay manavaka ary amin’ny dingana isan-karazany, hanome antsika ny antso ary dia mamaly Ny fanontaniana.
Na izany aza, izany no toe-javatra iray izay tokony tsy famoizam-po sy antoka fa tsy maintsy mandany fotoana ny fikarohana amin’ny Aterineto ny lahatsoratra momba ny heloka Bevava izay mety mahatakatra ny zavatra lahatsoratra nitranga ny heloka bevava ny raharaha.
Ianao maika mila fanampiana ara-dalàna heloka bevava ny mpisolovava (satria dia tsara kokoa noho ianao mahafantatra ny lalàna mifehy ny heloka bevava), fara fahakeliny, ho fakan-kevitra voalohany
Raha toa ka ny fanontaniana dia lehibe, dia tsara indrindra ny mahita za-draharaha mpanao heloka bevava ny mpahay lalàna ao an-Drenivohitra dia efa eo Ny raharaha avy hatrany rehefa avy ny raharaha nentina teo (fantatrao fa eo am-panaovana ny firosoana).
Ny heloka bevava ny mpahay lalàna ao an-Drenivohitra (ny heloka bevava mpisolovava) dia hihaona tamin’ny solontenan’ny fampiharana ny lalàna ny sampan-draharaha, izay nanomboka ny raharaha sy hanao professional fanombanana ny vaovao avy amin’ny loharanom-baovao, fa tsy ny tantara ny olon-tiana
Fomba Fisoratana anarana ho an'ny Fananana